के गायिका नेहा कक्कड गर्भवती भएकै हुन् त ? - नेपाल कुरा
के गायिका नेहा कक्कड गर्भवती भएकै हुन् त ?
एजेन्सी। अहिले फेरि गायिका नेहा कक्कड गर्भवती भएको खबर चर्चामा आउन थालेको छ । नेहा र रोहन एक दोस्रोलाई निकै प्रेम गर्छन् । उनीहरु अक्सर आफ्नो प्रेम सामाजिक सञ्जालबाट अभिव्यक्त गर्ने गरेका छन् ।
केहीदिन पहिले दुबै एयरपोर्टमा देखिएका थिए । केही समयदेखि नेहाको पहिरन सेन्स समेत केही परिवर्तन भएको छ । नेहा र रोहनको केही फरक स्माइलमा जुन तस्बिर बाहिर आएको छ । त्यसले नेहा गर्भवती भएको संकेत समेत दिएको छ ।
नेहा कामका पनि निकै सक्रिय रहने व्यक्ति हुन् । उनी टेलिभिजन तथा सामाजिक सञ्जालमा केही दिनको अन्तरमा चर्चामा छाउने गर्थिन् । अहिले भने उनी लामो समयसम्म इन्डियन आइडल सेटमा देखिएकी छैनन् ।
ऋचा चड्डा मानहानी मुद्दा : उच्च अदालतले सोध्यो, बयान फिर्ता लिन्छिन् पायल ?
मिस युनिभर्स नेपाल अंशिका भन्छिन्ः सबैको सहयोग र उत्कृष्ट तालिमले सफलता पाएँ
अक्षय कुमार सबैभन्दा बढी पारिश्रमिक बुझ्ने सेलिब्रेटीको शीर्ष १०० मा पर्न सफल